Nin horey u weeraray Madaxtooyada Maamulka KG Somalia oo la toogtay – Radio Daljir
Nin horey u weeraray Madaxtooyada Maamulka KG Somalia oo la toogtay
Maajo 19, 2015 1:58 b 0
Talaado, May 19, 2015 (Daljir) — Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa Saaka Xukun Dil ah ku Fulisay Nin ka tirsan Al-shabaab oo horay Maxkamaddu ay u Xukuntay laguna Magacaabi jiray Siraaji C/llaahi,waxaana Xukunka Dilka ah uu ka dhacay Duleedka Magaalada Baydhabo.
Ninkan saaka xukunka lagu fuliyay ayaa weerar ku soo qaaday xarunta madaxtooyada maamulka Koonfur galbeed Soomaaliya ee magaalada Baydhabo isagoo wata gaari lagu soo buuxiyay walxaha qarxa waxaana weerarkaasi ku geeriyootay sadex askari oo ka tirsan Ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed.
15/04/2015 ayaa Maxkamadda Ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya waxaa ay xukun dil ah ku riday iaydoo maantana xukunkaasi lagu fuliyay.
Ciidamo ka tirsan xooga dalka, Boliiska iyo Sirdoonka iyo nabad sugida qaranka ayaa fagaare ku yaala magaalada Baydhabo ayaa xukunka ku fuliyay ayagoo safaf la geliyay.
Goobta xukunkan lagu fuliyay ayaa waxaa joogay gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Liibaan Cali Yaow, gudoomiyaha Maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida gaashaanle Xasan Cali Nuur Shuute, Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gobolada Baay,Gedo iyo Bakool Janaraal Ibraahim Yarow iyo mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir.
Xildhibaan Dalxa oo Eedeeyay dowlada Soomaaliya
Gabdho ka tagay Kenya oo ISIS ku Biiray